Inkabadan 100 duqeyn oo diyaaradaha Maraykanku sanadkan ka fuliyeen dalka Yaman. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Inkabadan 100 duqeyn oo diyaaradaha Maraykanku sanadkan ka fuliyeen dalka Yaman.
On Dec 21, 2017 202 0
Taliska ciidamada Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday tirada duqeymaha sanadkan sii dhamaanaya ay ka fuliyeen dalka Yaman ee muslimka ah, kuwaas oo ay sheegeen iney ku beegsadeen mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jaziiradda Carabta.
Afhayeen u hadlay ciidamada Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in 120 duqeyn ay sanadkan 2017 ka fuliyeen gobollo kala duwan oo katirsan Yaman, kuwaas oo intooda ugu badan beegsaday mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jaziiradda Carabta, sida uu sheegay Afhayeenka.
Waxaa sidoo kale jira weeraro Inzaal ah oo ciidamada Maraykanku ka fuliyeen dalka Yaman oo uu ku jiro weerarkii Yaklaa ee ay ku xasuuqeen dad shacab masaakiin ah.
Maraykanku ma sheegin oo wuu ka gaabsaday tirada dadka shacabka ah ee duqeymahan uu ku dilay, balse xaqiiqda ayaa ah in inta ugu badan duqeymahan ay waxyeello gaarsiiyeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
Yaman oo kale, wuxuu Maraykanku duqeymo aan loo meel dayin kawadaa dalal badan oo Soomaaliya, Suuriya, Afqaanistaan iyo Ciraaq ay ku jiraan, waxaana jira sanad weliba boqollaal ruux oo ku shahiida duqeymaha diyaaradaha Maraykanku fuliyo.